Taorian’ny nanampian’izy ireo zaza tsy ampy taona mamita ny saziny eny amin’ny fonjaben’Antanimora amin’ny fambolena hahafahana miady amin’ny tsy fahampian-tsakafo dia manampy ireo vehivavy sahirana ihany koa ry zareo. Toerana maro no noteteziny tato ho ato nanolorana milina fanjairana ho an’ireo renim-pianakaviana hahafahana manatsara ny fidiram-bola ho an’ny isan-tokantrano. Nisy koa ny fizarana fitafiana ho an’ireo tena tsy manana. Nanatanteraka fihaonambe tetsy amin’ny Le pavé Antaninarenina izy ireo, omaly alakamisy 23 mey. Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha-20 taona nijoroan’ny fikambanana sy ny faha-60 taonan’ny fandraharahana ny fonja izany. Tanjona eto ny hanangana ny birao nasionaly hahafahan’izy ireo manambatra ny heriny, hoy ny filohan’ny fikambanana Rtoa Pilazare. Miisa 3.000 ankehitriny ireo mpikambana manerana ny Nosy.